Shanghai International Watersports Exhibition 2021 yakaitirwa kuShanghai World Expo Exhibition uye Convention Center musi waApril 1 kusvika 3, uye panguva imwe chete neAsia Boat Show. Takasaina chibvumirano nemurongi kuti tipe madziva emvura pashoo yacho. Madziva edu emvura esimbi akaiswa...
Yenguva Yenguva Fuel Storage Tangi yeMigodhi uye Zvekurima
na admin pa 20-09-08
Collapsible Fuel Storage matangi inzira inodhura yekuchengetedza zvinwiwa zvakawanda mupurazi remafuta kana nzvimbo hombe yekuchengetera. Yakatakurwa yakapetwa uye iri nyore kuendesa, matangi edu anochinjika isarudzo yakanakira yenguva pfupi yekuchengetedza mafuta ...
Anowanzozivikanwa sepillow bladder kana lay-flat style matangi, mabhegi aya anoramba ari nzira ine mari uye inogara ichizivikanwa yekuchengeta kana kutakura zvese zviri zviviri mvura inonwiwa nemvura inonaya, kana dhiziri nemafuta. Zviri nyore kupeteka uye zvishoma zvishoma, zvinogona kutakurwa kuenda kunzvimbo dziri dzoga dzisina chinhu, kana kuzara kana zvagadziriswa...
Kwete-Chepfu PVC Tarpaulin Hove Kurima Tangi
PVC Hove yekurima tangi yeaquaculture hove purazi, tsika yenguva pfupi, hove yekufambisa hove kuratidzwa, Folding dhizaini nePVC pombi rutsigiro. Isu tinopa Intensive Recirculating Aquaculture Systems (RAS) . Inogona kuburitsa huwandu hukuru hwehove panzvimbo diki, ichideredza kushandiswa kwenzvimbo yehove...